पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने निजामती कर्मचारीहरु
पर्यटन सचिव (हालका मूख्य सचीव)लिलामणी पौडेलको नेतृत्वमा गएको १५ जना निजामती कर्मचारी मध्ये ९ जनाले वि.सं. २०६८ जेठ ४ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । नेपाल सरकारले प्रत्येक सफल आरोहीलाई २१ लाख सहित सम्मान र कदर पत्र प्रदान गरेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन पर्यटन क्षेत्रको पुरस्कार (Tourism man of the year 2011 Award) समेत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत सरकारले आयोजना गरेको आरोहण अभियानमा पहिलोपटक निजामती कर्मचारीका ९ सदस्यले विःस २०६९ जेठ ४ गते सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । जसमा संलग्न सदस्यको नामावली यस प्रकार छ :
सि.नं. नाम मन्त्रालय/आयोजना
१ सुविर श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
२ हरि ढकाल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
३ सन्त कुमार महर्जन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
४ खिमलाल गौतम राष्ट्रिय भुउपयोग आयोजना
५ तुलसीराम भण्डारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
६ सुरथ पोखरेल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
७ हरिप्रसाद गुरागाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
८ पदमबहादुर भण्डारी शिक्षा मन्त्रालय
९ ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
2 Borstal School (वोर्सटल स्कूल)
6 List of Miss Nepal
7 जनताको घरमा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम के हो ?
10 Career News and Info चैत्र ९, २०७३